यो तस्वीर हेर्दा विचित्र महशुस हुन्छ ? तपाई निश्चित रुपमा यस्ता रोगको शिकार बन्नु भएको छ | Rajmarga
यो तस्वीर हेर्दा विचित्र महशुस हुन्छ ? तपाई निश्चित रुपमा यस्ता रोगको शिकार बन्नु भएको छ
फोबिया अर्थात कुनै कुराबाट डर लाग्नु । वैज्ञानिकहरुका अनुसार कुराबाट लगातार डराउनु नै फोबिया हो । हरेक मानिसलाई कुनै न कुनै कुराबाट डर लाग्ने गर्दछ । यही डरका कारण कतिपय मानिसलाई पैनिक अट्याक पनि आउन सक्दछ।
हाइड्रोफोबिया (पानीबाट डर) र एक्रोफोबिया (उचाईसँग डर)का बारेमा त तपाईले सुन्नु भएकै होला । तर हामी बताउँदै छौ दश यस्ता फोबियाका कारेमा जसका बारेमा कमै मानिसले जानकारी राख्ने गरेका हुन्छन् ।
ट्राइपोफोबिया सानो प्वाल वा विचित्रको पैटर्न देखेर लाग्ने डरलाई भनिन्छ । केही समय पहिला इन्टरनेटमा यो फोबियाका बारेमा कयौ प्रकारका तस्वीर आएका थिए । तपाईलाई बताइहालौ कि माथि देखिएको तस्वीर वास्तविक होइन, तर इन्टरनेटमा यसप्रकारका तस्वीरको माध्यमबाट यो फोबियाका बारेमा खुब चर्चा भएको थियो । केही अध्ययनकर्ताहरुका अनुसार अनलाइन स्वयमलाई यो फोबियाका शिकार मानिसहरु मात्र यो अस्वीरबाट विचलित भएर यो दावी गरिरहेका थिए ।
यो फोबियाको शिकार मानिस आफ्नो फिगरलाई लिएर सधैं तनावमा रहने गर्दछन् । स्वयमलाई परफेक्ट बनाउनका लागि उनीहरु कुनै पनि हद पार गर्न तयार हुन्छन् । पहिलाबाटै दुब्ला मानिस स्वयमलाई मोटो ठानेर आफ्नो तौल यति घटाउँछन् कि उनीहर झनै कुरुप बन्द थाल्छन् । अधिकांश मानिस यो फोबियालाई बुझ्नै सक्दैनन् । उपचार नभएका कारण कयौ मामिलामा मानिसहरुले आत्महत्या समेत गर्दछन्।
यो फोयिबा अधिकांश प्युबर्टीबाट गुज्रिरहेका युवकमा देखिन्छ । यसमा मानिसलाई दाह्रीदेखि डर लाग्ने गर्दछ । यसबाट पीडितहरु आफ्नो अनुहारमा थोरै रौं देखे पनि निकै अत्तालिने गर्दछन् ।
यो फोबियाबाट पीडित मानिसलाई कठपुतलीदेखि डर लाग्ने गर्दछ । यो डरको सुरुवात बाल्यकालबाटै हुन्छ । यसबाट पीडित मानिसहरु कठपुतलीलाई जीवित डानेर डराउन लाग्छन् । यसको शिकार मानिसलाई यस्तो सपना पनि आउँछ, जसमा कठपुतलीहरुले उसलाई मार्ने कोशिस गरिरहेको हुन्छ ।
यो फोबियाबाट पीडित मानिसलाई ऐना हेर्दा डर लाग्ने हुन्छ । उनीहरुलाई ऐनासामु कुनै छायाँ देखिन्छ ।बढी हरर मूभी हेर्ने गरेका कारण मानिसहरु यो फोबियाको शिकार बन्ने गर्दछन् ।
यो फोबियालाई आम भाषामा ६६६ भन्ने गरिन्छ । यो फोबियाको सम्बन्ध अन्धविश्वाससँग छ । कयौमा मानिसका अनुसार ६६६ शैतानसँग सम्बन्धित अंक हो । यो कुराको जिकिर बाइबलमा पनि छ । सन् २००६ मा जुन अर्थात ६/६/६मा कयौ यस्ता मामिला सार्वजनिक भएका थिए, जसमा गर्भवती महिलाहरुले डाक्टरसँग कुरा गरेर आफ्नो बच्चा जन्माउने मिति अगाडि सारेका थिए ।
यो फोबियाबाट शिकार मानिस सधैं साफसफाईका बारेमा सोचिरहन्छन् । हरेक ससाना काम गरेपछि उनीहरुलाई नहाउन मात्र मन लाग्ने गर्दछ । एजेन्सी
Previous post: रेकर्ड: देशभर आक्रामक ‘शत्रु गते’, अहिलेसम्मकै सर्वाधिक शो
Next post: विश्वकै चर्चित रोबर्ट सोफियाले नेपालका नायक अनमोल केसीसँग डेट जान मन छ भनेपछि…